Ezempilo: i-pornyimu iyisimo esivamile kakhulu Isisekelo Somvuzo
Ikhaya Impilo Ukuvuthwa Okungajwayelekile
Lesi sigaba sisekelwe ezincwadini ezivela kuGary Wilson Ubuchopho bakho ku-Porn, i-Inthanethi Ye-Porn kanye neSayensi Ekhulayo Yokulutha kanye nemvume yoMlobi.
Kuyini ukuvuselela okungavamile?
Amagama akhangayo, izithombe namavidiyo akade ekhona isikhathi eside –njengoba kunokushesha kwe-neurochemical okuvela kwabalingani bomlingani. Ngakho-ke yini eyenza i-porn yanamuhla iphoqe ngokukhethekile? Hhayi nje ubusha bayo obungapheli. I-Dopamine ivutha eminye imizwa kanye nesikhuthazo futhi, konke okuvame ukuvelela kakhulu kwi-porn ye-intanethi:
• Isimanga, ukushaqeka (Yini okungathusi ezithombeni ezingcolile zanamuhla?)
Ukukhathazeka (Ukusebenzisa izithombe ezingcolile ezingahambisani nezindinganiso zakho noma ezocansi)
• Ukufuna nokucwaninga (Ukufuna, ukulindela)
Eqinisweni, i-porn ye-intanethi ibukeka kakhulu njengalokho ososayensi bakubiza ngokuthi ukugqugquzela okungaphezu kwamandla. Eminyakeni edlule, umklomelo kaNobola uNikolaas Tinbergen wathola ukuthi izinyoni, izimvemvane nezinye izilwane zingakhohliswa zikhethe amaqanda nabalingani bomshado mbumbulu. Izinyoni zezinsikazi, ngokwesibonelo, zazinzima ukuhlala kumaqanda amakhulu okuphila kukaTinbergen, anamagqabha abonakala ngokugqamile ngenkathi amaqanda awo aphaphathekile, ajiyile efa enganakekelwa. Oobhungane besilisa abazozishaya indiva abangane bomshado bangempela bethanda imizamo eyize yokuhlangabezana namabhodlela ansundu ansundu amabhodlela kabhiya. Kubhungane, ibhodlela likabhiya elilele phansi libukeka njengowesifazane omkhulu kunabo bonke, omuhle kakhulu, futhi ocansini kunabo bonke abake babona.
Ngamanye amagama, esikhundleni sokuphendula okungokwemvelo kokuma 'endaweni emnandi' lapho kungasikhangi khona isilwane emdlalweni wokukhwelana ngokuphelele, lolu hlelo olungokwemvelo luyaqhubeka nokudala izimpendulo zomdlandla kuzimo ezingezona ezingokoqobo, zokwenziwa.
UTinbergen ubize izinkohliso ezinjalo ngokuthi 'izinto ezingajwayelekile,' yize manje sekuvame ukubhekiswa kuzo njengezinto ezingajwayelekile '.
Izikhuthazi ezingavamile ziyizinguqulo ezinehaba zezisusa ezijwayelekile esizibona ngamanga njengezibalulekile. Kuyathakazelisa ukuthi yize kungenakwenzeka ukuthi inkawu ingakhetha izithombe kunabalingani bangempela, izinkawu 'zizokhokha' (imivuzo yejusi ye-forego) ukubuka izithombe zezinsikazi zezinkawu zesifazane. Mhlawumbe akumangazi ukuthi i-porn yanamuhla ingaduna imizwa yethu.
I-porn ye-intanethi ishukumisa kanjani kakhulu?
Lapho senza ukugqugquzela okungaphezu kwamandla omzimba okubaluleke kakhulu kithi ngoba kubangele ukuqhuma okukhulu kwe-dopamine emjikelezweni womvuzo wobuchopho bethu kunomlingani wayo wemvelo. Kubasebenzisi abaningi, omagazini bezocansi bangaphambili abakwazanga ukuncintisana nabalingani bangempela. I-Playboy centrefold ayizange iphindaphinde ezinye izinkomba abasebenzisi be-porn bangaphambilini babefunde ukuzihlanganisa nabalingani abangabakhona noma abalingani bangempela: ukuthintana kwamehlo, ukuthinta, iphunga, ukuthakazelisa kokudlala ngothando nokudansa, ukubukwa kwangaphambili, ubulili njalonjalo.
I-porn yanamuhla ye-intanethi, noma kunjalo, ihlanganiswe nokukhuthaza okungaphezu kwamandla. Okokuqala, inikeza ama-hotties amanoveli angapheli atholakalayo ngokuchofoza. Ucwaningo luqinisekisa ukuthi ukulindelwa komvuzo nobusha kuyakhulisana ukuze kwandiswe isasasa futhi kusebenze kabusha ukujikeleza komvuzo kobuchopho.
Okwesibili, izithombe ze-intanethi zinikeza amabele amaningi angathuthukiswa futhi i-Viagra i-gargantuan penises, izikhwama ezikhukhumezayo zesifiso, ukushayela iminyango, ukufakela kabili noma kathathu, ukungena kwezingxabano nezinye izimo ezingenakwenzeka.
Okwesithathu, kubantu abaningi, izithombe ezimile azikwazi ukuqhathaniswa namavidiyo anamuhla achazwa ngemizuzu engu-3 yamavidiyo wabantu abenza ucansi olunamandla. Ngama-bunnies anqunu konke onakho kwakuwumcabango wakho uqobo. Uhlala wazi ukuthi kuzokwenzekani ngokulandelayo, obekungakhulumi kakhulu kumuntu oneminyaka engu-13 ubudala wangaphambi kwe-inthanethi. Ngokuphambene nalokho, ngokusakazwa okungapheli kwamavidiyo athi 'Angikholwa engikubonile', okulindelwe kuphulwa njalo (lapho ubuchopho buthola kukhuthaza kakhulu). Khumbula futhi, ukuthi abantu bavela ekufundeni ngokubuka abanye benza izinto, ngakho-ke amavidiyo anamandla kakhulu okuthi 'kanjani' izifundo kunama-stills.
Ngobuqili besayensi obekungenza ukuthi uTinbergen athi, 'Ngikutshele kanjalo', abasebenzisi be-porn banamuhla bavame ukuthola i-internet erotica ivusa kakhulu kunabalingani bangempela. Abasebenzisi bangahle bangafuni ukuchitha amahora bezingelwa phambi kwekhompyutha begqolozele izithombe ezingcolile futhi bechofoza ngenkani ezithombeni ezintsha. Bangase bakhethe ukuchitha isikhathi bezijabulisa nabangane futhi bahlangane nabalingani abangaba khona kule nqubo.
Kodwa-ke iqiniso lilwela ukuncintisana ezingeni lokuphendula kwengqondo, ikakhulukazi lapho umuntu ephonsa ibhalansi ukungaqiniseki nokubuyiselwa emuva kokuxhumana komphakathi. Njengoba iSonto LaseNowa likubeka kumemori yakhe I-Wack: Inomlutha we-Porn Internet, 'akukhona ukuthi bengingafuni ucansi lwangempela, ukuthi nje kwakunzima kakhulu futhi kudideka ukulandela kunezithombe zocansi.' Futhi lokhu kuthola i-echo kuma-akhawunti womuntu wokuqala:
"Ngahamba isikhathi sokungashadile, ngigxila edolobhaneni elincane lapho kwakukhona khona amathuba ambalwa okuthandana, futhi ngaqala ukushaya indlwabu kaningi nge-pornography. Ngangimangaza ukuthi ngisheshe ngiphumelela kanjani. Ngaqala ukulahlekelwa izinsuku zokusebenza ngidinga amasayithi e-porn. Kodwa angizange ngikuqonde ngokugcwele okwakungenzeka kimi kuze kube yilapho ngilala embhedeni nomunye wesifazane futhi ngizibambe ngenyameko ukukhumbula isithombe esithandekayo se-porn ukuze ngithole kanzima. Angizange ngicabange ukuthi kungenzeke kimi. Ngenhlanhla, nginesisekelo eside sokulala ocansini enempilo ngaphambi kocansi futhi ngabona ukuthi kwenzekani. Ngemva kokuyeka, ngaqala ukuphinda ngibekwe futhi futhi kaningi. Futhi ngemva nje kwalokho ngahlangana nomkami. "
Indlela Indlwana Yezithombe Esebenzisa Ngayo I-Stimuli Engavamile
Kulezi zinsuku, akukho ukuphela kokuvuselelwa okungaphezu kwamandla okubonwayo. Umkhakha wezocansi usuvele unikeza ama-3-D porn namarobhothi namathoyizi ocansi avumelaniswe ne-porn noma abanye abasebenzisi bekhompyutha ukulingisa isenzo somzimba. Kepha ingozi icashe lapho okuthile:
• Ukubhalisa njengento 'eyigugu' ikakhulukazi, okungukuthi, inguqulo exaggerated yento okhokho bethu (futhi thina) ababa nayo ukuze bathole ukunganaki (ukudla okuphezulu kwekhalori, ukuvuswa kocansi),
• itholakale kalula ngokunikezwa okungenamkhawulo (engatholakali emvelweni),
• iza ezinhlobonhlobo (intsha eningi),
• futhi siyaziqhenya ngokweqile.
Ukuncishiswa okuncane, okuningi okungenamsoco kufanelana nalesi simodeli futhi kuhlonishwa yonke indawo njengento evusa kakhulu. Ungaphula isiphuzo se-32-ounce esithambile kanye nesigxobo sezinyosi ezisawoti ngaphandle kokucatshangwa, kodwa zama nje ukudla ama-caloric alinganayo eminyameni eyomile kanye nezimpande ezibilisiwe!
Ngokufanayo, ababukeli bahlala bechitha amahora bevula izingosi zamavidiyo wezocansi befuna ividiyo efanele ukuze baqede, begcina i-dopamine iphakanyisiwe isikhathi eside ngokungavamile. Kepha zama ukucabanga ukuthi umzingeli-oqoqayo uhlala echitha inani elifanayo lamahora ukushaya indlwabu kunombolo efanayo yodonga odongeni lomhume. Azange kwenzeke.
I-Porn ibeka izingozi ezihlukile ngaphezu kokugqugquzela okungaphezu kwamandla. Okokuqala, kulula ukufinyelela, kuyatholakala 24/7, mahhala futhi kuyimfihlo. Okwesibili, abasebenzisi abaningi baqala ukubuka izithombe zobulili ezingcolile ngokuthomba, lapho ubuchopho babo busezingeni eliphakeme kakhulu lepulasitiki futhi abasengozini enkulu yokulutha nokulutha kabusha. Ekugcineni, kunemikhawulo ekusetshenzisweni kokudla: umthamo wesisu kanye nokwenqaba okungokwemvelo okungena lapho singeke sikwazi ukubhekana nokulunywa okuthile.
Ngokuphambene, akukho mingcele ngokomzimba ekusetshenzisweni kwe-intanethi ye-intanethi, ngaphandle kwesidingo sokulala nokuphumula. Umsebenzisi angakwazi ukunqanda (ukushaya indlwabu ngaphandle kokucindezeleka) kuma-porn amahora ngaphandle kokubangela imizwa ye-satiation, noma ukuphikisa.
Ukuzitika nge-porn kuzwakala njengesithembiso senjabulo, kepha khumbula ukuthi umlayezo we-dopamine akuyona 'ukwaneliseka'. Kungukuthi, 'qhubeka, ukwaneliseka kuseduze kwekhoneni':
"Ngizovusa eduze ne-orgasm bese ngima, ngihlale ngibheka izithombe ezingcolile, futhi ngihlala emazingeni aphakathi, njalo ngiyahlela. Ngangikhathazekile kakhulu ngokubuka izithombe ezingcolile kunokuba ngifinyelele ku-orgasm. Izithombe zobulili ezingcolile zangivalele ekugqibeleni kuze kube sekugcineni ngisuke ngikhathele futhi ngisondelene nokuzinikela.
<< Ukucindezeleka Umlutha >>